Shirka madasha qaran oo la filaayo in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka madasha qaran oo la filaayo in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka furmo shirka madasha wada-tashiga qaran oo arrimo xasaasi ah looga hadli doono.
Shirkaasi oo ay kasoo qeyb gali doonaan hogaamiyeyaasha madasha wada-tashiga ayaa sida la sheegay socon doonno laga bilaabo 2-da ilaa 4-ta bishaan August.
Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo dhawaan la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkaasi diiradda lagu saari doonno arrimaha doorashada dalka iyo qaabkii ay u dhici lahayd.
Wuxuu wasiir Maareeye sidoo kale sheegay in shirka ay sidoo kale ka qeyb-gali doonaan guddiga doorashadda dalka oo warbixin ku aadan doorashooyinka u gudbin doona hogaamiyeyaasha madasha wadatashiga Qaran.
“Wuxuu shirkaan dhacayaa 2-da ilaa 4-ta bisha August, waana shir muhiim ah, waxaa warbixin looga dhageysan doonnaa guddiga doorashooyinka qaranka, kuwaas oo sheegaya qorsha ugu danbeeya ee doorashooyinka” Sidaas waxaa yiri wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Xayir Maareeye.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka dalka oo maalintii shalay la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in madasha wada-tashiga qaran ay u gudbin doonaan arrimaha ku aadan xilliga ay dhaceeyso doorashada dalka.
Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta xisbiyada dalka iyo musharixiinta qaarkood ayaa walaac xoogan ka muujinaya in doorashada aysan dhici doonin waqtigii loogu talo galay, dowladana ay qorsheynayso muddo kororsi, iyadoona shirka maanta laga yaabo inuu dib uga dhaco xilliga maanta la qorsheeyay.